Muddee 20, 2017. Oduu, Ibsa ABO irraa laatame, Haala Yeroo irrratti qophii mata dureen isaa “Waraanni Ummata O romoo irratti kan labsame har’amiti” jedhuu fi Sagalee Bolisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Amaaraa. | QEERROO
Muddee 20, 2017. Oduu, Ibsa ABO irraa laatame, Haala Yeroo irrratti qophii mata dureen isaa “Waraanni Ummata O romoo irratti kan labsame har’amiti” jedhuu fi Sagalee Bolisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Amaaraa.
1 thought on “Muddee 20, 2017. Oduu, Ibsa ABO irraa laatame, Haala Yeroo irrratti qophii mata dureen isaa “Waraanni Ummata O romoo irratti kan labsame har’amiti” jedhuu fi Sagalee Bolisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Amaaraa.”
Pingback: Muddee-20, 2017. Oduu-Ibsa ABO irraa laatame, Haala Yeroo irrratti qophii mata dureen isaa “Waraanni Ummata O romoo irratti kan labsame har’amiti” jedhuu fi Sagalee Bolisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Amaaraa. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA